Izindaba - I-Rugao ihlanganisa kabusha imigwaqo kamasipala e-4 enamalambu emigwaqo ye-LED yelanga
URugao wenza kabusha imigwaqo kamasipala e-4 enamalambu emigwaqo elanga ye-LED
Iphrojekthi yokulungiswa kwamalambu e-LED yamalambu kaZhongshan East Street endaweni esemadolobheni kungathiwa yiphrojekthi emele yentuthuko kamasipala waseRugao. Lo mgwaqo ekuqaleni wawusebenzisa amalambu e-sodium ukukhanyisa. Ukuze kukhuthazwe ukukhanyisa ngokonga, amalambu emigwaqo elanga angama-240W e-LED ashintshe amalambu e-sodium angama-294 500W, kanye nama-120Wamalambu emigwaqo e-LEDkufakwe amalambu e-sodium ayi-154 250W. Izinga lokonga ugesi elingu-65%, elonga u-440,000 kWh ngonyaka. Yonga imali engaphezu kuka-390,000 yuan ezindlekweni zikagesi.
Ngemuva kwe- isibani somgwaqo i-LEDuguquko, ukukhanya okujwayelekile kobuso bomgwaqo kufinyelele kokuphindwe ka-1.5 ukukhanya okujwayelekile kwesibani sokuqala se-sodium. Impilo yesibani yamahora angaphezu kwama-50,000 idlula kude impilo yesibani se-sodium amahora angama-8,000. Isikhathi eside sewaranti seminyaka emi-5 kuye kwengu-6 siyabonakala, kanti ukonga ugesi minyaka yonke kungamahora angama-2.685025 wezigidi zama-kilowatt, Kugcinwa ama-yuan ayizigidi ezingama-2.368192 ezindlekweni zikagesi, kunciphisa ukukhishwa kwe-CO2 ngamathani ayi-1022.99 futhi konga amathani ayi-886.06 amalahle ajwayelekile.
ukuvikelwa, ukuvikelwa kokuqhuma, nokuhambisana kwe-electromagnetic.
UHenning Helmers, inhloko yethimba labacwaningi, uthe: “Le ndlela yamafilimu ezacile inezinzuzo ezimbili ezisobala ngokusebenza kahle. Okokuqala, ama-photon abhajwe esitokisini ukukhulisa ukumuncwa kwamandla we-photon eduze negebe lebhande. Ngasikhathi sinye, lokhu Ukulahleka kokushisa nokudluliswa kokudluliswa kuncishisiwe, okwenza ibhethri lisebenze kangcono. Okwesibili, ama-photon angaphakathi akhiqizwa ukucubungula ngemisebe ayabanjwa futhi asatshalaliswe kahle. Lokhu kwandisa impilo yesithwali esisebenzayo futhi kwengeza namandla.
U-Andreas Bett, uMqondisi we-ISE Research Institute, uthe: “Ukudluliswa kwamandla kagesi okukhanyayo kunezicelo eziningi. Isibonelo, ukuqapha isakhiwo somoya ophephela; ukuqapha ulayini we-voltage ephezulu, izinzwa zikaphethiloli noma amanethiwekhi we-passive optical kumathangi kaphethiloli wezindiza; ukuphakelwa kokufakelwa kokufakwa kwangaphandle noma Nikeza amandla angenantambo kuzinhlelo zokusebenza ze-IoT. ”
Ngokusho kwemibiko, ngo-Ephreli 2021, abacwaningi be-ISE bathole ukusebenza ngokuguqulwa kwama-26% kumaseli elanga anezinhlangothi zombili ezixhumana nabo, irekhodi.
UMercom phambilini ubike ukuthi i-III-V / Si tandem cell elanga ithuthukiswe ngqo ku-silicon ngabaphenyi be-ISE basetha irekhodi elisebenza kahle lama-25.9%.
Isikhathi Iposi: Jul-16-2021